How is Blood Drawn? - Somali/English — EthnoMed
You are here: Home → Patient Education → Blood → How is Blood Drawn? - Somali/English
Waa sidee dhiig qaadista?
Khabiir daryeelka caafimaadka loo tababaray ayaa gacantaada dhiig ka qaadi doona, khabiirka oo isticmaalaaya cirbad nadiif ah. Dhammaan qalabka loo isticmaalo dhiig qaadista waa nadiif waana la tuuraa marka dhiiga lagaaga qaado kaddib. Waxay qaadataa oo keliya waxooga daqiiqada ah qaadista dhiigaada iyo ujeeddadda baaritaanada dhiiga badankood. Nooc kastoo baritaanka dhiiga ah wuxuu u baahan yahay caddad khaas ah in la qaado; khabiirka daryeelka caafimaadka oo dhiiga kaa qaadaaya wuxuu qaadaa oo keliya in ku filan oo macquul ah si uu u sameeyo baaritaanada takhtarkaaga u baahan yahay.
Duritaanka ficil ahaan waa xanuun yar-yahay; waxaad dareemaysaa oo keliya khanjaruufa yar. Kaddib marka la qaado caddadda dhiigi loo baahnaa, waxaa lagu weydiin doonaa inaad faashadda ku dhaydid kuna cadaadisid meesha lagaa duray. Marka khabiirka daryeelka caafimaadka kaa qaado dhiigaada wuxuu hubinaa in calaamadaha dhiig baxa joogsadeen, sharooto ayaa lagu dhejinaa gacantaada meeshi dhiiga laga qaaday. Haddii aad dareentid suuxdin ama lalabo, u sheeg khabiirka daryeelka caafimaadka ee dhiiga kaa qaadaayo, iyagaa hubinaaya inay ku raalligeliyaan. Ku feker waxyaabo aad ku faraxsan tahay oo ku dejinaaya haddii cabsi aad dareentid.
Cunto oo lacunu baaritaanka dhiiga kaddib waxay caawisaa inay jirkaaga ku soo celiso dhiigi la qaaday. Haddii aad ogaatid wax nabar ah ama barar agagaarka meesha dhiiga laga qaaday, saar boorso qabow ah. Haddii dhiiga sii socdo markaas kaddib, wac takhtarkaaga.
Baaritaanada dhiiga qaarkood waxaa loo baahan yahay in aadan waxba soo cunin ama waxba soo cabin 12 saacadood ka hor intii aan dhiiqa lagaa qaadin. Kan waa loo baahan yahay, tusaale ahaan, taariikh nololeedka xeerta dhiiga ku jirta taasoo ah koox baaritaano oo inta badan wada-jir loo dalbo si loo go’aamiyo khatarta cudurka halbowlayaasha wadnaha. Takhtarkaaga ayaa kuu sheegaaya haddii aad u baahan tahay inaadan waxba soo cunin ama waxba soo cabin baaritaanka dhiiga ka hor.
Mararka qaarkood, takhtarkaaga ayaa dalbaaya noocyo kala duwan ee baaritaanka dhiigaada isla mar ahaantaas waxaa loo baahnaan doonaa caddad yaroo dhiiga ah oo dhalooyin kala duwan lagu kala shubo, sidaas darteed dhiiga wuxuu diyaar u yahay in lagu baaro mashiino kala duwan.